Xasaradda ka taagan Venezuela oo cirka mareysa - BBC News Somali
Xasaradda ka taagan Venezuela oo cirka mareysa
23 Febraayo 2019
Madaxweyne Nicolás Maduro ayaa xiray xadka Venezuela uu la wadaago Brazil
Wararka laga helayo dalkaasi Venezuela ayaa sheegaya in koox dadka asal ahaan ka soo jeeda Venezuela ay isku dhaceen ciidammada ammaanka ee uu soo amray madaxweyne Nicolas Maduro - kuwaasoo isku dayayay inay ka hortagaan gargaar ka soo gala xadka Brazil.
Hoggaamiyaha mucaaradka Juan Guaido, oo isagu bishii hore isku magacaabay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi, Mareykankuna uu u sacabba tumay, ayaa sheegay inuu doonayo in gargaar ka socda Mareykanka iyo mid caalami ah la geeyo dalkaasi.
Madaxwayne Maduro oo ku guulaystay doorashadii Venezuela
Sida ay xiisadda Venezuela isugu baddali karto dagaal caalami ah
Waa tallaabo uu madaxweyne Maduro hore u diiday, isagoo dafiraya in xasarad bani`aadannimo ay dalkiisa ka jirto.
Madaxweynaha dalka Chile Sebastian Pinera, madaxweynaha Colombia Ivan Duque, hoggaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido iyo madaxweynaha Paraguay Mario Abdo Benitez oo dhammaan ka qayb galay bandhigga tooska ah ee gargaarka Venezuela.
Dhanka kale, Xadka Venezuela uu la wadaago dalka Colombia, tobnaan kun oo qof ayaa ka qayb galay isu imaatin uu soo qaban qaabiyay bilyaneerka Richard Branson.
Madaxweynayaasha Chile iyo Colombia ayaa ka soo qayb galay. Isu imaatin kale oo uu meel halkaasi 300m u jirta uu ka soo abaabulay madaxweyne Nicolas Maduro ayaysan dad badan ka qayb galin.
19 Juunyo 2021